महिलाप्रतिको पुरुष सोच !
२०७९ जेठ २४ गते ०७:०७:०० मा प्रकाशित
मानिसलाई सबै भन्दा तनाव शारीरिक अबस्थाले होइन मानसिक अवस्थाले दिने हो । यदि तपाइँलाई कुनै तनाव छ ,भने यो तपाईँको मानसिक कारणले भएको हो । मानसिक तनाव कति बेला उत्पन्न हुनछ, भने जब तपाँइँ अरुका बारेमा बढी चिन्ता गर्न थाल्नु हुन्छ । जस्तो त्यो केटीले मैले भनेको कुनै पनि कामहरु गर्न मानिनन् तर उसले अरुले भनेको चाहीँ मान्छिन । अथवा त्यो केटीले अरुले भनेको मान्दा तपाइलाई के फरक पर्यो । र ऊ प्रति चिन्तित हुनु हुन्छ । के तपाईले चाही अरुले भनेको सबै कुराहरु मान्नु भएको छ र रु
हामी दक्षिण एसियाका मान्छेहरुमा रहेको सबै भन्दा संकुचितपना भनेको अरुका बारेमा अनावश्यक चासो लिनु र नचाहिन्दो चिन्ता गर्नु हो । हिजो बेलुका ऊ रातभरी निदाएन अरे,किनभने उसले एकोहोरो मन पराउने केटी अरुसंग बसेर चिया खाइरहेकी थिइन अरे । अनावश्यक रुपमा अरु प्रति शंका चिन्ता रिस, ईष्या ,डाहा र कुभलो आदि गर्न चाहन्छौँ । हाम्रो मनमा ती कुराहरु आउँछन, भने हामी कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक रोगी हौ ।
महिलालाई बलियो र सक्षम बनाउन पुरुषहरु चिन्तित छैनन् । उनीहरु त महिलामाथि शंका गर्न र कसरी महिलालाई आफ्नो इच्छा अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चिन्तित देखिन्छन् । जसकारण उनीहरु तनावमा छन् । पुरुषको यही स्वभावबाट जोगिनका लागि महिलाहरु पनि तनाव झेल्न बाध्य छन् ।
अब हामी मानसिक स्वास्थ्य विभागमा जानु ठीक हुन्छ । अरुको धन अरुकी श्रीमति अरुका छोराछोरी आदिको विषयलाई लिएर हामी नाना प्रपञ्च गर्न तयार हुन्छौँ । हामीसंग जे जति छ त्यसमा नै चित्त बुझाउने प्रयास गर्नु पर्छ ।
सर्पका हात र खुट्टाहरु हुदैनन् तर पनि उनीहरुसंग हामी हात र खुट्टाहरु भएकाहरु डराउनु पर्छ । बाघ ओडारमा नै सुत्छ तर उसंग सुनका खाटमा सुत्नेहरु पनि बिना हतियार मुकाबिला गर्न सक्दैनन् । यसको मतलव यो होइन कि अरुका साना तिना कमिकम्जोरीहरु माथि धावा बोल्न बन्द गर्नुपर्छ। जिउँदो मान्छेको संगत गर्नु भनेको के हो भने आज हामीले हेप्न खोजेको मान्छे भोलि हामीलाई सजिलै जुनसुकै कारवाही गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । यसको मतलव हामी अरुलाई मेरो वसमा राख्छु मेरो खटनपटनमा हिडाउँछु भन्ने धारणाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
हामी किन मत्स्यन्याँय वा जंगली राज जस्तो अरुलाई अनावश्यक रुपमा हस्ताक्षेप गर्न चाहान्छौँ । हामीले हाम्रो परिवार माथि राणा शासन चलाउन खोजेका छौ । एकजनालाई मात्र मस्ति भएर हुन्छ रु सबैको लागि स्वातन्त्रताको संसार कसरी बन्छ ? सोच्न जरुरी छ ।
अजिंगरले के खान्छ र कसरी खान्छ भन्ने कुरामा किन गफ गरी रहनु , के अजिंगरले मान्छेले खाने तरिकाका बारेमा कहिले खिल्ली उडाउला त । चुनावका जितहारका परिणामहरु आउँछन् । तर हामी आफै उम्मेदवार बनेर जितेको वा हारेको जस्तो गरेर उत्तेजित भएका छौँ । हामीलाई त त्यस्तो हुन्छ भने त्यो हार्ने वा जित्नेलाई चाहि कस्तो होला त ? हो हाम्रो मष्तिस्कको सम्रचनागत सम्रचनाहरुको अध्यानले के देखाएको रहेछ भने मानिसको मष्तिस्कलाई लगातार ४० मिनेट भन्दा माथि एउटै कुरा वा भाषणहरु सुनायो भने त्यसले पछाडी त कामै दिदैन तर अगाडीको पनि ४० प्रतिशत घटाइ दिने रहेछ । त्यसैले युरोपका स्कुलहरुमा ४० मिनेटको पिरियड हुन्छ । ४० मिनेटको लगातारता पछि कम्तिमा पनि ५ मिनेट ग्याप गर्नु पर्ने रहेछ । नत्र बालबालिकाहरुमा तनाव हुने रहेछ । यसरी सुरु भएको तनाव बढ्दै गएपछि मानिसमा अरुका बारेमा चिन्ता गरेर तनाव लिने बानीको बिकास हुने रहेछ । अरुका बिषयमा चिन्ता गर्ने मानिसहरु त्यो कुरा प्राप्त गरे पनि फेरी त्यसैलाई नराम्रो मानेर अर्को त्यस्तै कुराहरु पाउन सुरु गर्छन ।
बढी श्रीमतीहरु विवाह गर्ने पुरुषहरुमा गरीएको अनुसन्धानमा पनि उनीहरु कुनै पनि श्रीमतीहरुसंग सन्तुष्ट भएका पाइएनन् । यसको मतलव ती मानिसहरुको मानसिकता ठीक छैन ।
फुर्र चरी भुरुरु खोली तिरै तिर, तिम्लाई सधैं हाइ सञ्चो मलाइँ पिरै पिर भने जस्तै हाम्रो समाजमा देखिएको सामाजिक वा पारिवारिक अवस्थालाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ रु जसले जे भने पनि हाम्रो दक्षिण एसियाको समाजमा पुरुषहरुको सोचाइ र व्यवहारमा महिलाहरु मानसिक र शारीरिक रुपमा नै कम्जोर छन । र पुरुषहरुका झुट्टा आश्वासन र फन्दामा सजिलै पर्छन भन्ने पितृसतात्मक सोचको अन्त्य घरघरबाटै फाल्नु जरुरी छ ।